बेरोजगारलाई रोजगारी, जागिर नपाए निर्वाह भत्ता ! – Waikhari
गृहपृष्ठ खबर बेरोजगारलाई रोजगारी, जागिर नपाए निर्वाह भत्ता !
बेरोजगारलाई रोजगारी, जागिर नपाए निर्वाह भत्ता !
८ असोज, काठमाडौं । नेपालको संविधानको धारा ३३ को कार्यान्वयनका लागि ‘रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ले ऐनको रुप लिएको छ । ऐनले प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापनाको परिकल्पना गरेको छ । यद्यपि अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना भइसकेका छैनन् ।